Ihe Mgbapụta Ahụ—Onyinye Kasịnụ Chineke Nyere - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
12 Bible na-enye nkọwa zuru ezu banyere ahụhụ Jizọs tara tupu ya anwụọ. A pịakasịrị ya ahụ́, jiri obi ịta mmiri kpọgide ya n’elu osisi, ya anwụọkwa ọnwụ ahụhụ n’elu osisi ịta ahụhụ. (Jọn 19:1, 16-18, 30; Ihe Odide Ntụkwasị) N’ihi gịnị ka o ji dị mkpa ka Jizọs taa ahụhụ dị ukwuu otú ahụ? N’otu n’ime isiakwụkwọ ndị dị n’ihu, anyị ga-ahụ na Setan kwuru na ọ dịghị ohu Jehova ọ bụla bụ́ mmadụ nke ga-anọgide na-ekwesị ntụkwasị obi n’ọnwụnwa. Site n’iji ikwesị ntụkwasị obi tachie obi n’agbanyeghị nhụjuanya, Jizọs nyere azịza banyere ịma aka Setan n’ụzọ kasị mma. Jizọs gosipụtara na mmadụ zuru okè nke nweere onwe ya ime nhọrọ pụrụ ịnọgide na-eguzosi ike n’ezi ihe n’ụzọ zuru okè nye Chineke n’agbanyeghị ihe ọ bụla Ekwensu ga-eme. Ọ ghaghị ịbụ na Jehova ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu n’ihi ikwesị ntụkwasị obi nke Ọkpara ya ọ hụrụ n’anya!—Ilu 27:11.
15Mgbaghara mmehie. N’ihi ezughị okè e ketara eketa, ọ na-esiri anyị ike ime ihe ziri ezi. Anyị nile na-emehie n’okwu ọnụ ma ọ bụ n’omume. Ma, site n’àjà mgbapụta Jizọs Kraịst, anyị pụrụ inweta “mgbaghara nke mmehie anyị.” (Ndị Kọlọsi 1:13, 14) Otú ọ dị, iji nweta mgbaghara dị otú ahụ, anyị aghaghị inwe nchegharị n’ezie. Anyị aghaghịkwa iji ịdị umeala n’obi rịọ Jehova, na-arịọ ka ọ gbaghara anyị ná ndabere nke okwukwe anyị nwere n’àjà mgbapụta nke Ọkpara ya.—1 Jọn 1:8, 9.
16Inwe akọ na uche dị ọcha n’ebe Chineke nọ. Obi amamikpe pụrụ n’ụzọ dị mfe ịkpata enweghị olileanya ma mee ka anyị chee na anyị abaghị uru. Otú ọ dị, site ná mgbaghara mmehie nke a pụrụ inweta n’ihi ihe mgbapụta ahụ, Jehova ji obiọma na-enyere anyị aka iji akọ na uche dị ọcha na-efe ya n’agbanyeghị ezughị okè anyị. (Ndị Hibru 9:13, 14) Nke a na-eme ka o kwe anyị omume inwe nkwuwa okwu n’ebe Jehova nọ. N’ihi ya, anyị pụrụ ịgakwuru ya n’ekpere mgbe ọ bụla anyị chọrọ. (Ndị Hibru 4:14-16) Ịnọgide na-enwe akọ na uche dị ọcha na-eme ka e nwee udo nke uche, na-akwalite ùgwù onwe onye, na-esokwa eme ka e nwee obi ụtọ.
17Olileanya nke ndụ ebighị ebi n’ụwa paradaịs. Ndị Rom 6:23 na-ekwu, sị: “Ụgwọ ọrụ nke mmehie na-akwụ bụ ọnwụ.” Otu amaokwu ahụ na-agbakwụnye, sị: “Ma onyinye nke Chineke na-enye bụ ndụ ebighị ebi site na Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.” N’isi nke 3 nke akwụkwọ a, anyị tụlere ngọzi ndị Paradaịs elu ala ahụ na-abịanụ ga-eweta. (Mkpughe 21:3, 4) Ngọzi ndị ahụ nile a ga-enweta n’ọdịnihu, gụnyere ndụ ebighị ebi n’ahụ́ ike zuru okè, ga-ekwe omume n’ihi ọnwụ Jizọs nwụrụ maka anyị. Iji nweta ngọzi ndị ahụ, ọ dị anyị mkpa igosi na anyị nwere ekele maka ihe mgbapụta ahụ e nyere.
20Gosipụta okwukwe n’àjà mgbapụta Jizọs. Jizọs n’onwe ya kwuru, sị: “Onye na-egosipụta okwukwe n’Ọkpara ahụ nwere ndụ ebighị ebi.” (Jọn 3:36) Olee otú anyị pụrụ isi gosipụta okwukwe n’ebe Jizọs nọ? A dịghị egosipụta okwukwe dị otú ahụ nanị n’okwu ọnụ. Jems 2:26 na-ekwu, sị: “Okwukwe nke na-enweghị ọrụ bụ nke nwụrụ anwụ.” Ee, e ji “ọrụ,” ya bụ, omume anyị, egosipụta ezi okwukwe. Otu ụzọ isi gosi na anyị nwere okwukwe n’ebe Jizọs nọ bụ site n’ime ike anyị nile iji ṅomie ya, ọ bụghị nanị n’ihe anyị na-ekwu, kamakwa n’ihe anyị na-eme.—Jọn 13:15.
21Na-anọ ya n’Oge Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị a na-eme kwa afọ. N’anyasị Naịsan 14, 33 O.A., Jizọs malitere otu ihe omume pụrụ iche nke Bible na-akpọ “nri anyasị nke Onyenwe anyị.” (1 Ndị Kọrint 11:20; Matiu 26:26-28) A na-akpọkwa ihe omume a Ncheta nke ọnwụ Kraịst. Jizọs malitere ya iji nyere ndịozi ya na ezi Ndị Kraịst nile ga-esochi ha aka ịnọgide na-echeta na ya nyere ndụ ya dị ka ihe mgbapụta site n’ọnwụ nke ọ nwụrụ dị ka mmadụ zuru okè. Banyere ihe omume a, Jizọs nyere iwu, sị: “Nọgidenụ na-eme nke a iji na-echeta m.” (Luk 22:19) Ịnọ ya n’oge Ncheta nke ọnwụ Jizọs na-echetara anyị ịhụnanya dị ukwuu nke ma Jehova ma Jizọs gosiri n’ihe banyere ihe mgbapụta ahụ. Anyị pụrụ igosi ekele maka ihe mgbapụta ahụ site n’ịnọ ya n’oge Ncheta nke ọnwụ Jizọs a na-eme kwa afọ.*
* Iji nwetakwuo ihe ọmụma banyere ihe Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị pụtara, lee Ihe Odide Ntụkwasị.